Malunga nathi - iZhangjiagang Riching Machinery Co., Ltd.
I-Zhangjiagang Riching Mahcinery isekuveliseni nasekuthengiseni oomatshini, ingcali ngakumbi koomatshini beplastiki. Abatyali mali bethu basebenza kwicandelo lemveliso yeplastiki iminyaka emininzi.Sizinikele ekuthengiseni abatyali zimali zethu 'eqiupment, kunye nezinye izinto kunye nezinto ezingafunekiyo.
Ishishini lethu libandakanya ukuhlamba ngeplastikhi kunye nezixhobo zokurisayikilisha, extruder, umatshini wokucheba, ukucofa umatshini, iinxalenye zomatshini weplastiki njl njl.
-Ulungelo lwethu -
Siqokelela iinjineli ezinamava kwicandelo leplastiki, sikulungele ukuthengisa kunye nomntu wenkonzo emva kokuthengisa, Ngubani owenza iteknoloji kakuhle, enobuchule bokunxibelelana kunye nokukwazi ukubonisa intetho ngesiNgesi esibhaliweyo nesithethiweyo.
Iindleko kunye nexabiso
Thina (bonke abatyali mali) siyadibanisa ukuhanjiswa kwetyathanga kwiindawo ezingasentla, sikwabelana ngeqonga lokuthengisa kunye nabasebenzi kunye neenjineli, ezinciphisa iindleko zemveliso, iindleko zolawulo kunye nexabiso lokuthengisa kakhulu.
Injongo yethu kukwakha iqonga elinye lokumisa, iqonga lenkonzo kunye netekhnoloji yokuxhasa iqonga labathengi kwicandelo lomatshini weplastiki. Nceda amaqhekeza ukunciphisa iindleko zokuthenga, ukulawula umgangatho.Nceda amaqhekeza ukuqondisa ukuthenga kumzi-mveliso waseChina.Yakha ibhulorho enye phakathi kwabathengi kunye nabatyali zimali (umzi mveliso ophakathi ophakathi)
Inkqubo yokuthintela ukhuphelo kumgangatho wenqanaba Zonke izixhobo ezineenkcukacha ngaphambi kokuziswa, sinenjineli yethu ukuqinisekisa.
Asisifumani nje kuphela njengomvelisi kunye nomthengisi, sinike ingqalelo kodwa sincedise abathengi ukuba bafumane izixhobo ze-qulaity ngexabiso eliphantsi, abathengi mabangabi naxhala emva kokuthenga.
1.Kucetyiswa iimeko zobunjineli ezifunekayo ukuze kufakelwe
komatshini kunye nezixhobo
2.Ukunxibelelana kwangexesha ngenkqubela phambili yemveliso
umatshini kunye nomsebenzisi
Ukubonelela ngoncedo kwiimeko zobugcisa, ukudibanisa ukudibanisa
kunye nokuhanjiswa kwemigqomo efunekayo kwimveliso
1.Providing kwi ndawo uncedo lobugcisa ufakelo, ukugunyazisa noqeqesho
2.Ukugcwalisa ngokweenkcukacha ulwazi lomthengi
Ukunikezela ngenkonzo yolondolozo lwexesha elide kunye nezinye izinto
4.Ukunika inkxaso yezobugcisa kumthengi ekuphuhliseni imveliso entsha
5. Ukubonelela ngesondlo simahla sonyaka